Amiir Hamzaha Jordan ayaa balan qaaday inuu u hogaansamayo nidaamka boqortooyada… – Hagaag.com
Amiir Hamzaha Jordan ayaa balan qaaday inuu u hogaansamayo nidaamka boqortooyada…
Posted on 6 Abriil 2021 by Admin in World // 0 Comments
Amiirkii looga shakisanaa inuu maleegayay inqilaab Amiir Hamzah ayaa saxiixay warqad uu ku balan qaaday inuu u hogaansamayo dhaqamada iyo qaababka qoyska boqortooyada ee Hashemite ee xukuma Jordan.
Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay qasriga boqortooyada, xabsi gurigii la geliyay Amiir Hamzah ayaa la fududeynayaa.
Amiir Hamzah, amiirkii hore ee dhaxalka boqornimada, ayaa saxiixay warqadda kadib markii uu la kulmay amiir Xasan, boqorka adeerkiis, iyo amiirro kale Isniintii sida ay shaacisya qasriga boqortooyada.
Dawladdu waxay ku eedeysay Amiir Hamzah inuu ku lug lahaa shirqool fidno ah oo “khalkhal galinaya amniga boqortooyada”, waxayna la xireen isaga ugu yaraan 16 qof oo kale, oo uu ku jiro Bassem Awadallah, oo horay u soo noqday wasiir ka tirsan golaha wasiirrada, madaxna ka soo noqday qasriga boqortooyada.
Qasrigu wuxuu sheegay in Abdullah uu ka codsaday adeerkiis, Prince Hassan, inuu “ka qabto su’aasha Amiir Hamzah ee ku saabsan nidaamka qoyska Hashemite ”.
Hamzah – oo Cabdullah ka xayuubiyey darajada dhaxal-sugaha taajka 2004 – wuxuu ku eedeeyay hoggaanka Jordan musuqmaasuq, eex iyo xukun kali talisnimo.